မဒမ်ကိုး: မခင်ငြိမ်း ..မငြိမ်းသေးပါ.
သူရွာအလူညမှာ ငုတ်ထိုးမိလို့ငန်းဝင်ပြီး ဆုံးပြီးကတည်းက.မခင်ငြိမ်းဘ၀မငြိမ်းရရှာတော့ပါ.
သွားလေသူကလေးတို့အဖေကိုပဲတမ်းတမိသယောင်ယောင်......။ကံကြမ္မာကိုဘဲ ယိုးမယ်ဖွဲ့ရတော့မလိုလို ။
မုဆိုးမသားအမိတွေကိုများစာနာသနားရင်လေ...နည်းနည်းလောက်တော့မိုးနောက်ကျပါ့လား..။ သက်ကယ်လဲမပျစ်နိုင်သေး။ ခေါင်လဲမချူပ်ရသေး။မိုးလေကြီးလာရင် မိုးကယိုလာတော့မည်။
တအီအီမြည်နေသောဝါးကြမ်းခင်းပေါ်တွင်မထချင်ထချင်လေးပင့်တွဲစွာဖြင့်မခင်ငြိမ်းထရပ်ပြီးမီးဖိုဘေးကဆန်ခွက်ကိုလှမ်းနှိုက်လိုက်တော့ ဆန်ခွက်နှင့် အိုးထိသည့်အသံကဂလောက်ခနဲမြည်သည်။
(၁၉၉၇ ခုနှစ်ကာလများဆီတွင် ကျောက်ပုန်းရွာသို့အလည်သွားစဉ်.
မကြီးဒမ်ကိုးရဲ့ ၉၉ ခုနှစ်လက်ရာကလည်း ကောင်းလွန်းပါတယ်ဗျာ.....တကယ်ပီပြင်တယ်...သဘောကျတယ် မကြီးရေ.....
မဒိုးက ၉၉ခုနှစ်ထဲက ဝတ္ထုတွေရေးနေတာပါလား သဘာဝကျကျဇာတ်အိမ်လေး၊ စာရေးကောင်းတယ်။
May Khin said...
ဟုတ်တယ်..မဒိုးကန်က ၉၉ ကတည်းက စာရေးဆရာမ
သနားလိုက်တာ ..း( စိတ်ထဲပူနေရသေးတယ် .. စာရေးဆရာ ဇာတ်နာလိုက်မလားလို့း(
ကိုယ်တိုင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါသော ဘ၀ တွေပေါ့ ဂျာရစ်ရယ်
ဆင်းရဲခြင်း တွင်းနက်သလို ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အရာမှာလည်း အဲသည်လို ဘ၀ လေးတွေက သိပ်ကိုနက်ကြတယ်ဗျာ.....
ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းတဲ့ ကာလ တွေမှာ သည်လိုအရေး သည်လိုအတွေး မျိုးတွေ မရေးစေချင်ဘူး
ဖတ်ရင်းနဲ့ ၀မ်းနည်းလာတယ် ဒိုးကန်ရေ။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်တောင် ပြန်မြင်ယောင်မိသေးတယ်။ အော်...ဆင်းရဲလှတဲ့ဘ၀ပါလား။ လူတွေမှာ ဘ၀ချင်းတူပါလျက်နဲ့ အနေအထားချင်း ကွာလိုက်ကြတာ။
၀တ္ထုတိုလေး အရမ်းကောင်းတယ်။ သုတ၊ ရသအစုံပါတယ်။
ကိုရင်လည်း ပြောလိုက်ပါဦး သတိရကြောင်းပါ။ အွန်လိုင်းမှာလည်း မတွေ့တာကြာတော့လေ။
September 27, 2012 at 11:21 PM
ဒီလိုအစ်မတွေရှိပါလျက်နဲ့.. ဒီမောင်ကိုက အတုံးမကျတာ ပါဗျာ..။ ကတောက်.။ ကွကို စိတ်တိုတယ်.။
ကိုယ်မြင်တွေ့ ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကို
အရေးအသားကောင်းချက် ငါ့သမီးရယ်...။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကိုမြင်သာတာ...။ဘ၀သရုပ်ဖော်ပီပြင်လွန်းတယ်..။
မကြီးလွမ်းရောက်ခဲ့တယ်။ မငြိမ်းချမ်းသေူတဲ့ ခင်ငြိမ်း
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်... ဒီလို မိသားစုလေးတွေ ဘယ်လောက်တောင် တို့ နိုင်ငံမှာ ရှိနေမလဲလို့ တွေးလိုက်မိတော့ ရင်မောသွားမိတယ်...
ညီမရဲ့ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဖော် အရေးအသားအောက်မှာ ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်၊ ဟင်းစားလေး တစ်နပ်လောက် ရဖို့အရေး ရုန်းကန်ရတဲ့ ဘဝတွေက ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းတွေ အပြည့်နဲ့ပါပဲ..၊ ကလေးတွေ အဖို့လည်း ဒီလိုဒုက္ခတွေနဲ့ပဲ လူလားမြောက်ကြ ရအုံးမှာ..။း(
October 1, 2012 at 2:26 PM
မျက်လုံးထဲမှာ မြင်ကွင်းတွေကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်အောင် ရေးနိုင်တဲ့ မဒမ်ကိုး နော်။
မြတ် ဖတ်သွားခဲ့ပါတယ် အစ်မ။ အရေးအသားကြောင့်ပေလား မသိ ဖတ်ရင်း ခံစားရတယ်။
ဖတ်ရင်း မောမိတယ်.. ရသ မြောက်တဲ့ ဝတ္ထုလေးပါပဲ ကိုး ရယ်
မငြိမ်းချမ်းတာ အကောင်းဆုံး ပုံဖော်သွားတယ်..
အစ်မဆိုဒ်ကို အခုမှ ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖူးတာပါ။
နှင်းဆီက ၀တ္ထုဖတ်တာဝါသနာပါလို့ အစ်မစာတွေလိုက်ဖတ်ပါတယ်။
ဒိုင်ယာရီလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ စာလာဖတ်သူတွေကိုပျော်စေချင်တဲ့စိတ် သိစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဒီစာတွေကိုရေးဖွဲ့ပါတယ်။
ပျော်တတ်သူ ခင်တတ်သူ ဒါပေမယ့်လိုချင်တာမရရင် အဲလိုအာပြဲကြီးနဲ့အော်ငိုတတ်တဲ့ စိတ်ကြီးတဲ့ သူကြီးသမီးဇီးသီး
မဒမ်ကိုးဆိုဒ်မှာရှိသောဝတ္တုများပိုစ့်များကဗျာများသည်ဘာသာပြန်များနှင့်ဝတ္တုများသည်လည်းမဒမ်ကိုး၏ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးအတွေး များကိုသာ ပုံဖော် ထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မည်သည့် ဆီကမှ ကူးယူခြင်းမရှိဘဲ မူပိုင် အတွေးအရေး သီးသန့်များ သာဖြစ်ကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်။ကူးယူဖော်ပြလိုပါကကွန်းမန့်မှာဖြစ်စေအီးမေးမှဖြစ်စေအသိပေးအကြောင်းကြားစေလိုပါသည်။
အနာရောဂါ ၀ဲရောဂါ ကင်း၏
ဗွီအိုအေ နှင့် အင်တာဗျူး
Blog Archive Oct 31 (1) Oct 24 (1) Oct 21 (1) Oct 16 (1) Oct 09 (1) Sep 24 (1) Sep 19 (1) Sep 16 (1) Sep 12 (1) Sep 10 (1) Sep 08 (1) Sep 05 (1) Sep 01 (1) Jun 06 (1) May 29 (1) Apr 01 (1) Mar 27 (1) Mar 26 (1) Mar 20 (1) Mar 12 (1) Oct 31 (1) Sep 21 (1) Sep 13 (1) Sep 08 (1) Aug 31 (1) Aug 23 (1) Jul 29 (1) Jul 17 (1) Jun 26 (1) Jun 13 (1) May 16 (1) Apr 16 (1) Apr 03 (1) Mar 26 (1) Mar 18 (1) Feb 28 (1) Feb 24 (1) Jan 31 (1) Jan 20 (1) Jan 16 (1) Jan 11 (1) Nov 25 (1) Nov 14 (1) Nov 06 (1) Nov 02 (1) Oct 15 (1) Oct 06 (1) Sep 27 (1) Sep 24 (1) Sep 19 (1) Sep 18 (1) Sep 10 (1) Sep 05 (1) Sep 03 (1) Aug 25 (1) Aug 21 (1) Aug 13 (1) Aug 05 (1) Jul 31 (1) Jul 28 (1) Jul 23 (1) Jul 20 (1) Jul 17 (2) Jul 13 (1) Jul 12 (1) Jul 05 (1) Jul 03 (1) Jun 20 (1) Jun 16 (1) Jun 07 (1) May 23 (1) May 18 (1) May 12 (1) May 08 (1) May 04 (1) Apr 30 (1) Apr 16 (1) Apr 14 (1) Apr 10 (1) Apr 09 (1) Apr 08 (1) Apr 07 (1) Mar 29 (1) Mar 23 (1) Mar 20 (1) Mar 18 (1) Mar 13 (1) Mar 09 (1) Mar 01 (1) Feb 29 (1) Feb 24 (1) Feb 19 (1) Feb 11 (2) Feb 02 (1) Jan 30 (1) Jan 25 (1) Jan 17 (1) Jan 16 (2) Jan 15 (1) Jan 09 (1) Jan 04 (1) Dec 31 (1) Dec 27 (1) Dec 22 (1) Dec 21 (1) Dec 18 (1) Dec 13 (1) Dec 10 (1) Dec 03 (1) Nov 28 (1) Nov 24 (1) Nov 21 (1) Nov 16 (1) Nov 11 (1) Oct 28 (1) Oct 20 (1) Oct 17 (1) Oct 15 (1) Oct 14 (1) Oct 07 (1) Sep 30 (1) Sep 26 (1) Sep 22 (1) Sep 19 (1) Sep 13 (1) Sep 07 (1) Sep 02 (1) Aug 31 (1) Aug 28 (1) Aug 26 (1) Aug 23 (1) Aug 22 (1) Aug 14 (1) Aug 13 (1) Aug 05 (1) Aug 04 (2) Aug 02 (1) Jul 31 (1) Jul 28 (1) Jul 19 (1) Jul 18 (1) Jul 16 (2) Jul 14 (2) Jul 12 (1) Jul 10 (1) Aug 29 (1) Aug 27 (1) Aug 25 (2) Aug 23 (3) Jun 19 (1)
အင်္ဂလန်သွား တောလား - ၃
Keunggulan dan review xiaomi yi cam
မကြီးဂျက် ( စံပယ်ချို )
မမမီးငယ် ( ကျမရဲ့နေရာလေး )
MyanmarNET ၁-ထောင်တန် account card နှင့် Ubiquiti Loco M2/M5 ဖြင့် MyanmarNET ကို ချိတ်ဆက် အသုံးပြုခြင်
မမမေ( မေဓါဝီ )
လေးလေးဂျစ် ( မုံရွာ )
ဆွေလေး ( ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး )
အသူ ✿ My Emotions ✿
အမကလိုရီ ( White Angel )
သူသူ ( ရွှေအိမ်စည်မေ )
မောင်ဘုန်း (ကောင်းကင်ဖြူ )
မောင်မင်းဧရာ ( နွေတေးရှင် )
ကိုအိကု ( မျောလွင့်တိမ် တို့ နားခိုရာ....)
တိမ်တွေပေါ်မှာ ကြယ်ပန်းလေးတွေ ပွင့်နေတုန်းပဲ
MYANMAR LINKS DIRECTORY
ဘုန်းဘုန်းတောက် ( တောက်ပကြယ်စင် )
madankoo. Powered by Blogger.